कसरी पुगे ‘सिरियामा ५ सयभन्दा बढी नेपाली युवती’ ? | Rajmarga
कसरी पुगे ‘सिरियामा ५ सयभन्दा बढी नेपाली युवती’ ?
काठमाडौ । द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सिरियामा केही समयअघि सर्लाहीकी ४७ वर्षीया तेजी देवीको मृत्यु भयो । उनको मृत्यु राजधानी नजिकैको सहरमा भएको जानकारी सिरियासमेत हेर्ने इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासमा आए पनि मृत्युको कारण अझै खुल्न सकेको छैन । सिरिया पुगेर सोधखोज गर्ने अवस्था नेपाली नियोग प्रतिनिधिको छैन । उनको शव स्थानीय अस्पतालमा बेवारिस छ ।
सरकारले सिरिया वैध रूपमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ । ‘मानव तस्करहरूले अवैध रूपमा विभिन्न बहाना मिलाएर घरेलु कामदार सिरिया पुर्‍याउने गरेका छन्,’ राजदूत अर्यालले भने, ‘यसलाई रोक्न सरकारले थप प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।’ सिरिया मात्र होइन, लेबनान र अन्य अफ्रिकी मुलुकमा समेत नेपाली युवतीहरू घरेलु कामदारका रूपमा पुर्‍याइएको उनले बताए । ‘घरेलु कामबाहेक अन्य क्षेत्रमा नेपाली छैनन्,’ उनले भने । कान्तिपुरमा खबर छ।
Previous post: नारी दिवसकै दिन १८ वर्षिय युवतीमाथि बर्बर यातना, सिंगो गाउँ रमिते
Next post: लौ आयो फेक न्युजसम्बन्धी अहिलेसम्मकै ठुलो अध्ययन, यसरी फैलन रहेछ फेक न्युज